Shaashadda kuraasta diyaaradaha | Ragga Stylish
Waxaan aaminsanahay wax walba oo ka sii sareeya in tikniyoolajiyaddu ay horeyba qeyb uga ahaayeen nolosheena isla markaana la'aantood maanta ay wax walba ka sii dhib badnaan lahaayeen, laakiin waxaan kaloo leenahay waxaa nagu hareereysan aalado, maquilas iyo alaabooyin teknoloji ah oo dhinac naga tagaya. sameynta waxyaabihii maalinlaha ahaa ee aan sameyn jirnay waagii hore, laakiin si fiican, markaan ka tagno tan, haddii aad jeceshahay safarka oo aad jeceshahay inaad duusho, maxaa ka fiican inaad hadda la kulanto shaashadaha kuraasta diyaaradaha.
Marka, waxaan kuu sheegayaa haddii aad ka daashay marwalba inaad daawato isla filimkaas oo si isdaba joog ah loo tusay markii aad ku safreyso bas ama tareen, hadda diyaaradaha waxay kaa caawinayaan inaad ka go'do, aad nasato oo aad dareento guriga inaad ku mahadsan tahay qaar ka mid ah hal-abuurka iyo shaashadaha casriga ah kuwaas oo gundhig u ah kuraasta, sidaa darteed waxaad dooran kartaa naftaada filimka ama muusikada aad rabto inaad dhageysato ama aragto.
Sidaa si la mid ah, waa in sidoo kale la ogaadaa in noocan diyaaradda ahi uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican marka ay timaaddo socdaallo dhaadheer, oo in ka badan 5 saacadood duulaya, maxaa yeelay habkaas ayaad naftaada ugu maaweelin kartaa shaashadan xarrago leh, ee la soo bandhigo iyadoo ku xiran laynka duulimaadka, cabbirro kala duwan ah, dhammaantoodna waa kuwo taabasho leh. Qaar ka mid ah shaashadahaani waa 27 inji oo ah cabbir aad u fiican oo aad ku arki karto filim kasta si qumman.
Dhinaca kale, sheeg in duulimaadyo kale oo badan ay horeyba ugu soo darayaan shaashadan kuraastooda, laakiin cabir yar, ilaa sagaal inji, halkaas oo aad ku soo diri karto emayl ama xitaa farriimo diyaaradda adigoon wax dhibaato ah qabin, sababtoo ah tikniyoolajiyadda duulimaadyadu waxay qaadaysaa tallaabooyin waaweyn.
Sidoo kale, waa inaad ogaataa in shaashadahaani leeyihiin menu aasaasi ah oo aad u fudud in la isticmaalo, maxaa yeelay waxaa lagu soo bandhigaa luuqado kala duwan waana fududahay in la maroTaasi waa sababta aanad wax dhib ah u lahaan doonin markaad dooranayso filimka ama kanaalka muusigga ah ee aad rabto inaad dhageysato, adigoo safarka oo dhan u qaadanaya sidii inaad gurigaaga joogtay oo kale.
Xigasho - walxaha macaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Shaashadda kuraasta diyaaradaha
Fikradaha in la xidho 3 nooc oo midab buluug ah: midab leh, xariijimo ah oo la hubiyey